I-PunchTab: Imivuzo Yomphakathi Nokuthembeka Kwanoma Yisiphi Isiza | Martech Zone
I-PunchTab: Imivuzo Yomphakathi kanye Nokuthembeka Kwanoma Yisiphi Isiza
NgoLwesihlanu, Septhemba 2, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Emasontweni ambalwa edlule bengivivinya ipulatifomu entsha ebizwa I-PunchTab. Kusuka kusayithi le-PunchTab:
I-PunchTab iyipulatifomu yokuqala yokwethembeka esheshayo yomhlaba evumela abanikazi bewebhusayithi (kufaka phakathi ama-blogger), abathuthukisi bezinhlelo zokusebenza nemikhiqizo ukudala uhlelo lokuthembeka olunikwe amandla kwezenhlalo nakwezamaselula mahhala ngemizuzu. Sinemikhiqizo emibili ethandwayo namuhla, yomibili engabizi lutho ukuyisebenzisa:
Uhlelo oluqhubekayo lokuthembeka ongalusebenzisa ukukhuthaza abasebenzisi bakho ukuthi bavakashele nsuku zonke, babelane ngokuqukethwe kwakho kumanethiwekhi omphakathi bese ushiya imibono (futhi sinethuluzi lokuthuthukisa elikuvumela ukuthi ungeze izindlela ezijwayelekile zokuthola amaphuzu). Abasebenzisi bazothola amaphoyinti nsuku zonke ngezenzo zabo futhi bangasebenzela imivuzo kusuka kukhathalogi yokwethembeka eyenziwe ngokwezifiso lapho bethola amaphuzu anele.
Iwijethi yokunikeza yokukhangisa yesikhathi esisodwa ekhuthaza abasebenzisi bakho ukuthi basabalalise igama elimayelana nesiza sakho ukuze bathole okufakiwe ku-raffle yomklomelo.
Okumangazayo ngepulatifomu ukuthi kulula ukuyisebenzisa nokuzisebenzisela yona. I-Punchtab ivumela umakethi ukuthi asethe kalula uhlelo lokuvuza kunoma yikuphi ukuxhumana nomkhiqizo… kusuka ku-Retweets, kuya ku-Facebook Likes, ku-Email Subscriptions. I-PunchTab inike amandla ngaphezulu kokuphana okungu-1,000 3 ezinyangeni ezi-100,000 ezedlule - kufaka phakathi eyodwa nguTim Ferris, MahaloGaming noCrunchGear. Inkulu kunazo zonke kwakuyiVyrso.com, eyathola okufakiwe okungaphezulu kuka-9,500 nabalandeli be-Facebook abangama-30 XNUMX ngezinsuku ezingama-XNUMX!
Abathengisi bewebhu beSavvy nabaninimabhizinisi bayazi ukuthi iningi lemali engenayo ezayo lizoqhutshwa ngokuzibandakanya okuphindayo, ukuthengiselana, nezincomo ngamakhasimende osuvele uwine. I-PunchTab inikeza ipulatifomu eyodwa ehlanganyela ngokugcwele kulawa makhasimende kuyo yonke indawo yokuthinta: online, social, offline, mobile kanye e-commerce. I-CEO noMsunguli uRanjith Kumaran
Kunezindawo ezingaphezu kuka-1600 ezisebenzisa izinhlelo zokwethembeka zisebenzisa iPunchTab
Lawa masayithi anika iPunchTab ukufinyelela kubathengi be-6MM (okusho ukuthi abantu abahlukile be-6MM babone izinhlelo zokwethembeka ezinikwa amandla yiPunchTab)
Amasayithi amakhulu kunethiwekhi yePunchTab abona ukuphindaphinda kokuzibandakanya kokuphakanyiswa kwe- 50% -100% kusuka “kumalungu”Ngaphezu komsebenzisi ojwayelekile. Lokhu, kunjalo, kufaka phakathi ukuzikhethela okuthile njengoba abasebenzisi abasebenzayo kungenzeka babe ngamalungu. Ingxenye ebalulekile ukuthi manje amasayithi akhombe futhi anikeze lawa mathonya wokuletha abantu abaningi ephathini ngePunchTab.
Amasayithi abuye abone phakathi Ukuphakama okungu-15% kuye ku-35% kwezenhlalo (okuthunyelwe odongeni, ukwabelana, ukuthumela i-tweeting)
Mar 24, 2012 ku-1: 07 PM
Kubukeka kuthakazelisa ngempela, ngoba kuzoba umlutha kakhulu ekwenzeni umsebenzi othile (i-tweet, ukuthandwa noma ukubeka +1) ukuthola imivuzo ethile.
Ngo-Apr 6, i-2012 ku-1: i-38 PM
Ngayifaka kuwebhusayithi yami, ngayifaka kubha yamathuluzi e-wibiya. Ngenxa yezizathu ezithile, izinkinobho ze-facebook kanye ne-google azinikezi okwamanje imivuzo, futhi abafundi bami bathola amaphuzu ngokuvakashela nokuphawula. Ngibikile inkinga kwaPunchTab bathi bazoyibheka.
Noma kunjalo, le plug-in emangalisayo enganika izikhuthazo kubantu ukuze benze izindatshana zande, futhi bathole imivuzo. Futhi kuma-blogs / amawebhusayithi, lokhu kuyinto enhle kakhulu!
Jul 10, 2012 ngo-8: 38 PM
Iwijethi ayibonanga ekhasini lami le-facebook